Dị ka nke a video si AhịaRep na-egosi, a nnukwu akụkụ nke outbound ahịa oge na-nọrọ ejikọta ma ọ bụ usoro ihe omume jikọọ na a ahịa. SalesRep na-eji akụrụngwa na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma, usoro nhazi asụsụ okike iji wepu mgbalị ahụ nke ndị ahịa gị, na-enyere ha aka ilekwasị anya ha niile na ọrịre - ọ bụghị njikọ ahụ.
Soro usoro - Omume oku, ederede na sistemụ email ga-arụ iji laa mgbe ndu ọ bụla gasịrị. SalesRep.ai na - arụ ọrụ na nzukọ gị na - arụ ọrụ nke ọma iji guzobe usoro dabere na ebe ahịa ahịa gị dị. Ọ bụrụ na ị nụtụbeghị onye ndu, a na-ewere usoro usoro kwesịrị ekwesị. Ọ bụrụ na ị na-esote n'ahịa ahịa gara aga a na-amalite otu dị iche. Tinye usoro ntinye ọ bụla achọrọ na SalesRep.ai.